के मान्छेको मात्रै रगत खाएर बाँच्ने चमेरो हुन्छ ? – Nepalpostkhabar
Hemant KC । २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:०२ मा प्रकाशित
चमेराको फुल कस्तो रंगको हुन्छ ? मेरो भाइले मलाई यो प्रश्न सोध्यो । उनको प्रश्न सुनेर म अकमक्क परें । मैले अनुमानको भरमा जवाफ दिएँ– पहेंलो पहेंलो होला, नत्र खरानी रंगको ।
मेरो जवाफ सुनेर ऊ मरिमरि हाँस्यो । कारण सोध्दा उसले दिएको जवाफ सुनेपछि पो म त झसंग भए , किनभने, उसको जवाफ थियो– ‘चमेराले फुल नै पार्दैन ?
साँच्चै नै चमेरा चरा जस्तै उड्न सक्ने प्राणी हो, तर यो चरा भने पटक्कै हैन । यो त विश्वको एक मात्रै उड्ने स्तनपायी जीव हो, जसले चरा जस्तै उडेपनि फुल पार्दैन, सिधैं बच्चा जन्माउँछ । फेरि यसले आफ्नो बच्चालाई दूध पनि खुवाउँछ । त्यति मात्र हैन, यसको चराको जस्तै अनुहार र चुच्चो हुँदैन, यसको अनुहार मूसाको जस्तो हुन्छ र चुच्चोको सट्टामा कुकुरका जस्ता तीखा धारिला दाँतहरु हुन्छन् । फेरि यसको शरीरमा चराको जस्तो प्वाँख नभएर रौं हुन्छन् । यो उड्ने भएकोले झट्ट देख्दा मान्छेहरु चरा भनेर झुक्किए पनि यो काट्टीकुट्टी चरासँग मिल्दैन ।
यो त विश्वको एक मात्रै उड्ने स्तनपायी जीव हो, जसले चरा जस्तै उडेपनि फुल पार्दैन, सिधैं बच्चा जन्माउँछ । फेरि यसले आफ्नो बच्चालाई दूध पनि खुवाउँछ । त्यति मात्र हैन, यसको चराको जस्तै अनुहार र चुच्चो हुँदैन, यसको अनुहार मूसाको जस्तो हुन्छ र चुच्चोको सट्टामा कुकुरका जस्ता तीखा धारिला दाँतहरु हुन्छन् । फेरि यसको शरीरमा चराको जस्तो प्वाँख नभएर रौं हुन्छन् । यो उड्ने भएकोले झट्ट देख्दा मान्छेहरु चरा भनेर झुक्किए पनि यो काट्टीकुट्टी चरासँग मिल्दैन ।
यस्ता विचित्रका शारीरिक बनावट तथा दिनभरि अँध्यारो गुफाहरुमा लुकेर रातिको समयमा मात्रै चलफिल गर्ने जस्ता विशेषताहरुले गर्दा चमेरालाई रहस्यमयको प्राणीको रुपमा विश्वभरिकै अधिकांश मान्छेहरुले लिने गरेका छन् र यसबारेमा अनेकौं अन्धविश्वासहरु पाल्ने गरेका छन् । धेरै जसो स्थानहरुमा चमेरा भनेको पैशाचिक शक्तियुक्त प्राणीको रुपमा मान्ने गरेको पाइन्छ । चमेराले मान्छेको रगत मात्रै खाएर बाँच्छ, त्यसैले त्यस्तो चमेरा सधैं मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने मौकाको खोजीमा रहन्छ र त्यस्तो चमेराले टोकेपछि मान्छे ठहरै हुन्छ भन्ने जस्ता धारणाहरु धेरै मान्छेहरुमा रहने गरेको पाइन्छ ।
के साँच्चै नै यो संसारमा मान्छेको रगत मात्रै खाएर बाँच्ने चमेरा पनि हुन्छ त ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने, त्यसको एउटै जवाफ फेला पर्छ– त्यस्तो चमेरा हुँदै हुँदैन । तर एउटा के कुरा चाहिँ सत्य हो भने, यस संसारमा रगत मात्रै खाएर बाँच्ने चमेरा भने हुन्छ । तर त्यो चमेराले मान्छेको रगत हैन, स–साना चराहरु तथा अन्य स्तनपायी जन्तुहरुको मात्र रगत खाने गर्छ । त्यसले मान्छेकै रगत खाएको घटना अत्यन्तै नगण्य छन् ।
त्यसरी अन्य प्राणीहरुको रगत खाएर बाँच्ने चमेरालाई भेम्पायर व्याट भनिन्छ ।
भेम्पायर ब्याटले एउटा कुशल सर्जनले जस्तै आफ्नो शिकारको छालालाई आफ्नो तीखो दाँतको माध्यमले चिर्छ र त्यहाँ सानो घाउ पारिदिन्छ । त्यसले यस्तो घाउ यति कुशलतापूर्वक पारिदिन्छ, शिकारले त्यो कुरा थाहा नै पाउँदैन । विशेष गरी, यसले सुतिरहेको प्राणीको शिकार गर्ने गर्छ । त्यसरी घाउ पारेपछि त्यसबाट निस्केको रगत चाटेर आफ्नो खानाको आवश्यकता पूरा गर्छ ।
यस संसारमा फेला परेका चमेराका ८५० देखि ९०० प्रजातिहरुमध्ये तीन वटा प्रजातिका चमेराहरु मात्र भेम्पायर ब्याटका रुपमा फेला परेका छन् । चमेराका कूल प्रजातिहरुमध्ये दुई तिहाईले त किरा फट्यांग्राहरु खाएर जीवन निर्वाह गर्छन् भने बाँकी एक तिहाईले त फलफूल, फूलका रस तथा परागकणहरु मात्रै खाने गर्छन् ।
संसारकै सबैभन्दा सानो स्तनपायी जीव
चमेरालाई आकारको आधारमा ठूला र साना गरी दुई वर्ग र १७ परिवारमा विभाजित गरिएका छन् । तीमध्ये १६ परिवार त साना वर्गमा पर्दछन् ।
चमेरा आर्कटिक क्षेत्र र सुदूर समुद्री टापूहरुलाई छोडेर संसारभरि नै पाइन्छ । सबै ठूला र केही साना चमेराहरु पूर्वी गोलार्द्धमा र अन्य साना चमेराहरु पश्चिमी गोलार्द्धमा पाइन्छन् । केही साना वर्गका चमेराहरु चाहिँ संसारभरि नै पाइन्छन् ।
जाभा प्रायद्वीपमा पाइने ठूला चमेराको फैलिएको पंखाको आकार ५।६ फिटसम्म र शरीरको आकार १६।७ इन्चसम्मको पाइएको छ । अर्कोतिर सानो चमेराको आकार चाहिँ २।९ देखि ३।३ से।मी। र तौल २ ग्रामसम्मको हुन्छ । यो नै संसारको सबैभन्दा सानो स्तनपायी जनावर हो ।
२ करोड चमेरा एकै समूहमा ?
मेक्सिकन फ्रीटेल्स ।
चमेराले गुफा, विशाल एवं झांगिएको रुख, विशाल चट्टानको काप, पुरानो खण्डहर, महल आदिलाई आफ्नो बासस्थान बनाउँछ । कतिपय प्रजातिका चमेराले गुँड बनाउँछ भने दक्षिण एशियामा पाइने एकथरि चमेराले अन्य कुनै कारणले प्वाल परेको बाँसभित्र समेत आफ्नो गुँड बनाउने गर्छन् । कतिपय चमेराहरु छुट्टाछुट्टै बस्ने गरेको पाइन्छ । तर अर्कोतिर, रुख गुफा वा महलमा बस्ने चमेराहरु चाहिँ समूहमा नै बस्ने गर्छन् । चमेरो यस्तो एउटै समूहमा केही हजारदेखि लिएर लाखौंको संख्यामा पनि चमेराहरु रहने गर्छन् । सान एन्टोनिया, अमेरिकाको बार्केन नाम गरेको गुफामा त मेक्सिकन फ्रीटेल्स प्रजातिका चमेराहरु एकै समूहमा २ करोडको संख्यामा पनि रहेको पाइएको छ । सम्भवतः यो नै विश्वमा चमेराको सबैभन्दा ठूलो समूह हो ।
चमेराले बच्चा जन्माउँछ तर यसको बच्चा जन्माउने दर अति सुस्त छ । धेरै प्रजातिका चमेराले एक पटकमा एक वा दुईटा बच्चा जन्माउँछ । कुनै कुनै ठाउँका चमेराले वर्षको एक पटक त कुनै ठाउँकाले वर्षको २ पटक बच्चा जन्माउँछ । एउटा चमेराले बच्चा जन्माउन गर्भाधान भएको ४० देखि ७० दिन लगाउँछ र यो १०० दिन पनि पुग्न सक्छ । भेम्पायर व्याटले चाहिँ ८ महिनासम्मको समय पनि लगाउँछ ।
भेम्पायर व्याट ।
भरखरै जन्मेको बच्चा चमेराको तौल आमाको तौलको १५–३० प्रतिशतसम्म हुन्छ । बच्चा चमेराले माउ चमेराको पेक्टोरल माम्मारी ग्लान्ड बाट दूध खान्छ । सामान्यतः चमेरा जन्मेको तीनहप्तादेखि उड्न थाल्छ । त्यसैताका त्यसको दूधे दाँत झरेर स्थायी दाँत पनि पलाइसकेको हुन्छ ।
मान्छेको हात जस्तै हुन्छ चमेराको पखेटा
चमेराको पखेटा चाहिँ हाम्रो हात जस्तै हुन्छ । र, छाताको करंगमा कपडाहरु टाँसिए झैँ गरी यसका औंलाहरुमा पातलो छाला टाँसिएर पखेटा बनेको हुन्छ । अर्थात्, चमेराका हत्केलाका अन्य औँला हड्डीहरु ९ाष्लनभच दयलभक० ले पखेटालाई आड दिएको हुन्छ । चमेराको पखेटाबाट एउटा नंग्रायुक्त औंला बाहिर निस्किएको हुन्छ, जसको मद्दतले चमेराले कुनै पनि चीजबीजलाई पक्रन वा हिँडडुल गर्न सक्छ ।
चमेराको पखेटा चाहिँ हाम्रो हात जस्तै हुन्छ । र, छाताको करंगमा कपडाहरु टाँसिए झैँ गरी यसका औंलाहरुमा पातलो छाला टाँसिएर पखेटा बनेको हुन्छ । अर्थात्, चमेराका हत्केलाका अन्य औँला हड्डीहरु ले पखेटालाई आड दिएको हुन्छ ।
चमेराको खुट्टाको पञ्जामा पनि तीखा नंग्राहरु हुन्छन् । त्यसै गरी, त्यसको पखेटामा पनि एउटा नंग्रा हुन्छ । तिनै नंग्राहरुको मद्दतले यो जमीनमा हिँड्न तथा रुखको हाँगामा झुण्डिन तथा सर्न सक्छ । चमेरा शिकार खोज्न बाहिर नगएको बेला उल्टो झुण्डिएर सुतेर बसिबस्छ ।
चमेराको पखेटा पातलो झिल्लीयुक्त हुन्छ र यो फैलिएर खुट्टासम्म जोडिएको हुन्छ । मान्छेले प्रयोग गर्ने ग्लाइडरको डिजाइन पनि यस्तै हुन्छ ।
शिकार पक्रनमा पखेटाको प्रयोग
शिकारको पिछा गरिरहेको चमेराले यतिछिटो आफ्नो दिशा बदल्न सक्छ कि, त्यसलाई हाम्रो आँखाले देख्नै भ्याउँदेन । यस कार्यमा यसले अहिलेको उच्च प्रविधियुक्त लडाकु विमानहरुलाई पनि मात खुवाइदिन्छ । तिनीहरुले आफ्नो पखेटालाई उड्न मात्र हैन, हावामा उडिरहेको किरालाई उठाउन समेत उपयोग गर्छ । कपितय चमेरामा त छालाको सानो पुच्छर समेत हुन्छ, जसको उपयोग त्यसले उडेको बेलामा सन्तुलन कायम गर्नका लागि समेत गर्छ ।
चमेराका कतिपय प्रजातिले चाहिँ आफ्नो पखेटालाई अगाडितिर सोतो जस्तो जाल बनाएर शिकारलाई पक्रन्छ । विशेष गरी डाउबेन्टन चमेरा ९म्बगदभलतयलुक दबत० ले किरालाई नदी वा तालतिर पक्रन यस्तो गर्ने गर्छ । त्यस बाहेक, यसले आफनो खुट्टाको मद्दतले पानीको सतहमा रहेको किरालाई पनि अन्य माछा खाने चराहरुले माछा समातेझै गरी समात्न सक्छ ।
चमेराको मुख मूसाको जस्तो हुन्छ । तर फलफूलको रस खाने चमेराको टाउको चाहिँ कुकुर वा फ्याउरोको जस्तो हुन्छ । त्यसैले यसलाई उड्ने फ्याउरो पनि भन्ने गरिन्छ ।
सानो जीवको लामो आयु
सानो जीव भएपनि चमेराको आयुचाहिँ तुलनात्मक रुपमा लामै हुन्छ । सामान्यतः चमेराको आयु १० वर्षको हुन्छ । तर सानो–खैरो प्रजातिका चमेरा ३० वर्षसम्म पनि बाँचेको पाइएको छ ।
जाडोबाट बच्न शीतनिद्रा र बसाइसराइ
चमेराहरुले विशेष गरी गुफा लगायतका राम्रो घाम नलाग्ने, अलि चीसो स्थानमा बास बनाउने हुनाले तिनीहरु एक आपसमा टाँसिएर बसेका हुन्छन् । जाडो महिनामा चीसोबाट बच्न चमेराहरु एक आपसमा टाँसिएर तथा गुडुल्किएर बस्छन् । केही चमेराहरु त जाडो महिनामा शीतनिद्रामा नै रहन्छन् । त्यस अवस्थामा तिनीहरुले यति सुस्त गतिमा स्वास फेरिरहेका हुन्छन् कि हामीलाई त्यो मरिसकेको छ भन्ने भ्रम हुन्छ । तर जब गर्मी महिना लाग्छ, तिनीहरु शीतल होस् भन्नाका लागि एक आपसबाट अलग हुन्छन् ।
चमेराहरुले विशेष गरी गुफा लगायतका राम्रो घाम नलाग्ने, अलि चीसो स्थानमा बास बनाउने हुनाले तिनीहरु एक आपसमा टाँसिएर बसेका हुन्छन् । जाडो महिनामा चीसोबाट बच्न चमेराहरु एक आपसमा टाँसिएर तथा गुडुल्किएर बस्छन् ।
गरम ठाउँका चमेराका केही प्रजातिहरु जाडो महिना लागेपछि चिसोबाट बच्न बसाइँसराइ गर्छन् । बसाइसराइ गर्ने क्रममा चमेराको समूहले १६०० किलोमिटरसम्मको दूरी पनि लगातार उड्ने गरेको पाइएको छ ।
चमेराका शत्रुहरु हैन,मान्छेका मित्र हुन्
चमेरालाई अधिकांश मान्छेहरुले शत्रु नै ठान्छन् । यसरी यसलाई शत्रु ठान्नुको प्रमुख कारणमा अन्धविश्वास बाहेक एउटा प्रमुख कारण यसले रेविज रोग सार्छ भन्ने डर पनि हो । तर विशेष परिस्थितिमा बाहेक, चमेराले मान्छेलाई कहिल्यै पनि आक्रमण गरिहाल्दैन । अहिलेसम्मको थाहा भए अनुसार, चमेराबाटै मान्छेमा रेविज रोग सरेको घटनाहरु नगण्य छन् । त्यसैकारण, चमेरालाई शत्रु ठान्नु उचित ठहर्दैन ।
बरु चमेराले अन्नबालीहरु नष्ट गर्ने थुप्रै हानीकारक किरा फट्यांग्राहरुलाई खाइदिएर मान्छेलाई ठूलो मद्दत गरिरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक, यसले किरा फट्यांग्राहरुलाई खाइदिएर वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले साँचो अर्थमा भन्ने हो भने, चमेरा मान्छेको शत्रु हैन, मित्रु हो ।
चमेराले अन्नबालीहरु नष्ट गर्ने थुप्रै हानीकारक किरा फट्यांग्राहरुलाई खाइदिएर मान्छेलाई ठूलो मद्दत गरिरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक, यसले किरा फट्यांग्राहरुलाई खाइदिएर वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले साँचो अर्थमा भन्ने हो भने, चमेरा मान्छेको शत्रु हैन, मित्रु हो ।
यसरी मान्छेको मित्र चमेराका शत्रुहरु भने थुप्रै छन् । बाज, उल्लू, मूसा, फ्याउरो, साँप आदि जनावरहरुले चमेरालाई आहारा बनाउँछ । अझ अफ्रिका र न्यूगिनीमा त चमेरा मात्रै खाएर बस्ने बाज पनि पाइन्छ । मांसाहारी चमेराले पनि अन्य प्रजातिका चमेराहरुलाई खाने गरेको पाइन्छ ।
रहस्यमय बनाइएको प्राणी चमेरा
विभिन्न मुलुकका पौराणिक कथाहरुमा एउटा रहस्यमय प्राणीको कल्पना गरिएको छ, जुन प्राणी रातको समयमा मात्र क्रियाशील हुन्छ र मान्छेको रगतको खोजीमा हिँड्छ । त्यसले विशेष गरी, चमेराको रुप धारण गर्छ र राति सुतिरहेको मान्छेको रगत चुस्छ । त्यसले रगत चुसेपछि त्यो मान्छे कि त मर्छ, कि त त्यो पनि त्यसरी नै रगत चुस्ने प्राणी बन्न पुग्छ ।
एकातिर, लोकविश्वासमा चमेरालाई अत्यन्तै रहस्यमय र खतरनाक प्राणीको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न रहस्य कथाहरु तथा फिल्महरुले पनि चमेरालाई रहस्यमय बनाउन अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । त्यस्ता फिल्म तथा पुस्तकका चमेरा भनेको पिशाचसँग सम्बन्धित प्राणी हो भनी देखाइएबाट मान्छेहरुले चमेराबारे अत्यन्तै नकारात्मक धारणा पाल्ने गरेका छन् । यसरी चमेरालाई रहस्यमय प्राणी बनाइदिने त्यस्तै एउटा पुस्तकको नाम हो– ड्रयाकुला ।
ड्रयाकूला त्यस्तो विषय हो, जुन प्रायः सबै भूतप्रेतका फिल्महरुमा प्रमुख पात्रको रुपमा रहने गरेको छ । यो काल्पनिक पात्रको रचना आयरल्याण्डका रहस्य–कथा लेखक ब्राम स्टोकर ९१८४७–१९१२० ले आफ्नो पुस्तक ‘ड्रयाकुला’ मा गरेका छन् । उक्त पुस्तकका अनुसार, अहिले रोमानियामा पर्ने ट्रान्सिलवेनियाका शासक अत्यन्तै दुराचारी रहेका र उनी आफूलाई चमेरामा बदलेर मान्छेको रगत चुस्ने गरेको चित्रित गरिएको छ ।
ट्रान्सिलवेनियाका ब्लाड नाम गरेका शासक अत्यन्तै अत्याचारी थिए । उनी दुश्मन खेमाका सैनिकहरुलाई मार्न अत्यन्तै आनन्दित मान्थे । यतिसम्म कि, उनी दुश्मन सैनिकहरुलाई अत्यन्तै घाइते बनाउन लगाएर उनीहरुलाई त्यसै तड्पीतड्पी मर्नका लागि छाडिदिन्थे ।
भनिन्छ, ट्रान्सिलवेनियाका ब्लाड नाम गरेका शासक अत्यन्तै अत्याचारी थिए । उनी दुश्मन खेमाका सैनिकहरुलाई मार्न अत्यन्तै आनन्दित मान्थे । यतिसम्म कि, उनी दुश्मन सैनिकहरुलाई अत्यन्तै घाइते बनाउन लगाएर उनीहरुलाई त्यसै तड्पीतड्पी मर्नका लागि छाडिदिन्थे । उनको यही हिंस्रक र अमानवीय चरित्रलाई चित्रण गर्दै स्टोकरले उक्त पुस्तक लेखका हुन् भनिन्छ ।
कसरी पत्ता लगाउँछ चमेराले आफ्नो शिकाररु
अधिकांश चमेराहरु रात्रिचर हुन्छन् । अर्थात् यी चमेराहरु रातिको समयमा मात्र शिकार गर्न निस्कन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– रातको अन्धकारमा पनि चमेराले कसरी आफ्नो शिकार ठम्याएर समात्छ होला
चमेराले आफ्नो शिकारलाई पत्ता लगाउनका लागि एक विशेष किसिमको प्राकृतिक विधि उपयोगमा ल्याउँछ, जसलाई प्रति–ध्वनि ठम्याइ ९भ्अजययिअबतष्यल० भनिन्छ । इको–लोकिशनको अर्थ कुनै पनि बस्तुको प्रतिध्वनि सुनेर त्यो वस्तु कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु हो । साना वर्गभित्र पर्ने सबै चमेराहरु, अझ विशेष गरी कीरा फट्यांग्राहरुले यही इकोलोकेशनको प्रयोग गर्छ ।
शिकारको खोजीमा उड्दा चमेराले हावामा उच्च आवृत्तिमा आवाज पैदा गर्छ । चमेराले निकाल्ने यो आवाजलाई मान्छेको कानले सुन्नै सक्दैन । त्यो आवाज वरिपरिको हावामा फैलिन्छ र वरिपरिका वस्तुहरुमा ठोक्किएर प्रतिध्वनि पैदा हुन्छ । त्यसरी फैलिएको त्यही प्रतिध्वनिलाई चमेराको अति संवेदनशील कान र नाकहरुले ग्रहण गर्छ । चमेराको मस्तिष्कका विभिन्न प्रकारका थाहा पाउने स्नायुहरुले त्यही प्रतिध्वनिलाई विश्लेषण गरेर त्यहाँ आफ्नो कुनै शिकार रहे, नरहेको विश्लेषण गर्छ । यदि त्यहाँ वरिपरि शिकार छ भने, त्यो शिकार कुन दिशामा छ, कति टाढा छ र त्यो कस्तो खालको हो भन्ने समेत पत्ता लगाई त्यसको सुस्पष्ट खाका समेत चमेराको मस्तिष्कको स्नायुहरुले तयार गर्छ । यही सूचना एवं विश्लेषणहरुका खाकाको आधारमा चमेराका मस्तिष्कले चमेरालाई शिकारतर्फ दिशा निर्देश गर्छ ।
यो ‘प्रतिध्वनि ठम्याइ’ विधि यति सटीक हुन्छ कि, यसले मान्छेको रौजत्रो चीज पनि कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सक्छ । यही विधिको प्रयोग गरेर सबै साना वर्गका चमेराहरुले केही कुरा देख्नै नसकिने अँध्यारो स्थानमा पनि आफ्नो शिकार कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउँछन् र त्यसलाई समात्न सफल हुन्छ ।
यसरी, यो ‘प्रतिध्वनि ठम्याइ’ विधि यति सटीक हुन्छ कि, यसले मान्छेको रौजत्रो चीज पनि कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सक्छ । यही विधिको प्रयोग गरेर सबै साना वर्गका चमेराहरुले केही कुरा देख्नै नसकिने अँध्यारो स्थानमा पनि आफ्नो शिकार कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउँछन् र त्यसलाई समात्न सफल हुन्छ ।
चमेराले शिकारको खोजीमा निस्कँदा कुन अंगबाट त्यस्तो उच्च आवृत्तिको आवाज निकाल्छ भन्ने कुरा यसका प्रजातिमा भर पर्दछ । अधिकांश चमेराहरुले सोझै स्वरयन्त्र हुने घाँटीमाथिको बाकसजस्तो अंग ९ीबचथलह० बाट आवाज निकाल्छ भने कतिपय प्रजातिका चमेराहरुले चाहिँ मुख वा नाकबाट पनि आवाज निकाल्दछन् ।
तर ठूला वर्गका चमेराहरुले शिकार पक्रने तरीका भने यसको ठीक उल्टो हुन्छ । यस्ता चमेराहरुले शिकार पक्रँदा सुन्ने विधिको सट्टा सोझै दृष्टिको प्रयोग गर्छ । ठूला वर्गभित्र पर्ने एउटा मात्रै प्रजातिको चमेराले मात्रै प्रतिध्वनि ठम्याइ विधिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यो पनि यसले यो विधिको प्रयोग रातिको समयमा शिकार गर्न निक्लँदा मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छ । यसरी ठूला वर्गका चमेराहरुले शिकार पक्रन दृष्टिको प्रयोग गर्ने हुनाले यसको आँखा साना वर्गका चमेराहरुको भन्दा अलि ठूला पनि हुन्छन् ।
अधिकांश मान्छेहरुमा के भ्रम रहेको पाइन्छ भने, चमेरा अन्धा हुन्छन् । तर वास्तवमा चमेरा अन्धा हुँदैनन् । यहाँसम्म कि, साना वर्गभित्र पर्ने चमेराले शिकारको खोजी गर्दा कहिलेकाहीँ अँध्यारो रातमा पनि दृष्टिको समेत प्रयोग गर्ने गर्छ । रातोपाटी